Inona ny fifandraisana eo amin'ny fanatanterahana ny SEO sy ny backlinks profile?
SEO sy backlinks dia fantatra fa tena ilaina tokoa ary angamba ny endrika sarotra indrindra amin'ny fampiroboroboana an-tserasera amin'izao fotoana izao - ny iray amin'ny iray. Na dia misy ifandraisany amin'ny tranonkala Search Engine Optimization aza ny fizotry ny fananganana rohy amin'ny ankapobeny, efa lasa kritika kokoa io faritra efa manan-danja io amin'izao fotoana izao - raha ny marina dia mitondra ny fivoaran'ny fivoaran'ny vohikala, indrindra amin'ny taona vitsy lasa. Midika izany fa ny tetikady rehetra ao amin'ny SEO sy ny backlinks dia azo havaozina haingana avy hatrany - amin'ny alàlan'ny algorithm hafa amin'ny algorithm amin'ny alàlan'ny Google (tsarovy ny fahasosoran'ny Penguin. sa tsy izany?). Na dia izany aza, misy toerana maromaro eo amin'ny seha-pifanakalozan-kevitra eo amin'ny SEO sy ny backlinks dia mijanona ho eo amin'ny lafiny tsara ary mahatsiaro ho voaro - eny fa na dia miovaova hatrany aza ny zava-misy eo amin'ny sehatra SEO - one tech portal.
Midika izany fa misy fitsipika fototra maromaro tsara amin'ny fandikana ireo lalàna mifehy ny lalao. Ary misy fifandraisana mazava eo amin'ny fampisehoana ankapobeny ao amin'ny SEO sy ny profil backlinks izay ao amin'ny tranokalanao na ny blôginao. Mamelà ahy hanome baiko bala sasantsasany mba hanaporofoana izany, ary koa soso-kevitra sasantsasany izay hanantena anao hanampy anao hisafidy ny paikady mahomby ho azy ireo - satria mino aho fa ny SEO sy ny backlinks ihany no mahatsapa hoe rehefa miaraka miara-miasa.
Fahazavana famantarana telo lehibe ho an'ny SEO - Amin'ny mason'i Google
1. Ny lahatsoratra an-tariby dia angamba ny famantarana mahery vaika izay azonao ampiasaina mba hitarika sy hijanona amin'ny fifaninanana.
2. Ny fizarana ara-tsosialy dia tsy izany fanapahan-kevitra izany, fa mbola fanamafisana tanteraka sy tena maharitra foana ny fitadiavana fikarohana.
3. Ny endri-tsoratra manokana na ny endriky ny sehatry ny indostria no sehatra farany indrindra amin'ny SEO sy ny rindran-damina nalefa mivantana avy amin'ireo mpampiasa mivelatra ary niparitaka be tao anatin'ireo fokonolona liana sy tsenam-barotra.
Sary manontolo amin'ny SEO sy Backlinks - Fomba mahazatra sy soso-kevitra mahasoa
Mamokatra votoaty tsy manan-tsahala sy manan-danja izay manome lanja tena ilaina amin'ny mpampiasa - Ny tranokalanao na ny blaoginao dia mendrika ny miverina tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fahefana ambony indrindra sy ny pejin'ny PageRank. Mazava ho azy fa tena asa mandaitra sy tena mafy tokoa izany, fa ho an'ny fananganana rohim-pifandraisana dia tsy maintsy manolotra soso-kevitra lehibe amin'ny asa soratranao. Raha ny marina, nahoana no tokony hampidirina amin'ny tranokalanao na ny blôginao ny mpihaino anao? Tsy hiteny ny indostria orinasa na ny mpitoraka bilaogy ambony indrindra - fa tsy tokony hitoetra ho mahaliana anao foana ianao.
Ny fandefasana Guest mba hahazoana ny rindran-kira ambony amin'ny alalan'ny AttFollow dia tena karazana rohy izay tena miasa ho an'ny tanjona SEO. Ny tena zava-dehibe dia afaka manome anao fikarohana lalindalina kokoa amin'ny fikarohana an-tserasera izany, raha manome lahatsoratra tena sarobidy na lahatsoratra bilaogy izay hiparitaka amin'ny Social Media ianao - mamorona anao mizara, mitondra, fanamarihana, fametahana, ary mazava ho azy fa ny voa tsara indrindra Miverina amin'ny endriny tsy miankina.
Tokony havaozina ny rindran-damba azo avy amin'ny tranonkala, na ny sira mifandraika (a. K. ny. PR sy fizarana fitokisana) fotsiny. Midika eto aho fa ireo rindran-damba novolavola tamin'ny fanehoan-kevitry ny blaogy, lisitra an-tserasera na fanoratana anarana dia saika novolavolain'ireo motera lehibe indrindra, mazava ho azy rehefa vita tsy misy fahatakarana mazava. Andao hiatrika izany - ity karazana rohy ity dia mety ho voasazy mihitsy aza. Indrisy anefa, maro loatra ny olona no miezaka mafy manangona ny pejiny miaraka amin'ny rohy mahaleotena maro araka izay azo atao - fotsiny mba hanatsarana ny SEO. Raha ny tena izy, na izany aza, ny rohy tsy misy lanjany toy izany sy ny karazan-javatra hafa avy amin'ny karazana manipulerina dia hahita hatrany na tsia amin'ny fomba fijery an'i Google, noho izany dia mampihatra sazy miharo mafy.